निर्वाचनकै मजाक हुनेगरी सत्तारुढ दलहरुले चुनावी गठबन्धन बनायो : राजेन्द्र महतो
बैशाख १६ २०७९
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका नेता राजेन्द्र महतोले निर्वाचनकै मजाक हुनेगरी सत्तारुढ दलहरुले चुनावी गठबन्धन गरेको टिप्पणी गरेका छन् । नेता महतोले निर्वाचनमा जनताले पार्टीलाई मत दिने भएपनि सत्तारुढ दलहरुले गठबन्धनको नाममा चुनाव लडेर गल्ती गरेको आरोप समेत लगाए । शुक्रबार काठमाडौंमा पार्टीको स्थानीय तह चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उनले सत्तारुढ दलहरु चुनावमा जाँदा जनताले कुन पार्टी भनेर बुझ्ने भन्ने प्रश्नसमेत गरेका हुन ।
देश र दुनियाँले नबुझ्ने गरी सत्तारुढ दलहरुले गठबन्धन बनाएर चुनावमा गएको नेता महतोको भनाई थियो । उनले भने, ‘जनतासँग मजाक भइरहेको छ । यहाँका ठूलाबडा पार्टीहरुले जनतासँग गठबन्धन भनेर मजाक गरेका हुन् । यो चुनाव भनेको जनताले आफूले रोजेको पार्टीलाई भोट दिने होइन रु विभिन्न पार्टीप्रति आफ्नो अभिव्यक्ति दिने हो । निर्वाचन त्यसका लागि गरिन्छ । यहाँ गठबन्धन भनेर कुन पार्टीको कुरा आइरहेको छ ? सरकारी पार्टीहरुले जुन गठबन्धन गरेका छन, त्यो कुन पार्टीको मान्यता हो रु कुन पार्टीको मत भनेर जनताले बुझ्ने हो? देश र दुनियाँले के बुझ्ने हो ? त्यसैले जनताले पार्टीको आधारमा चुनाव गराउने हो भने काँग्रेस पार्टीलाई कुन पालिका, कुन वडामा जनताले कति भोट दियो, माओवादी, जसपा, यी पार्टीहरूलाई जनताले कसरी समर्थन गर्यो भनेर कसरी बुझ्ने हो ? दलीय सिस्टम हो त्यो ? ’ उनले थप भने, ‘त्यसैले स्थानीय तह गठबन्धन गरेर जनताको मत कहाँ दियो, त्यो पनि पत्तो लाग्न नदिने प्रक्रिया निर्माण गरियो । त्यो गलत गर्यो क्या । हामी यही मान्यताको आधारमा गठबन्धन गर्नुपर्छ भनेर गएनौं । स्थानीय पार्टीले सकिन्छ भने गठबन्धन गर्न सक्छन । तर हामीले धेरै महत्व दिएका छैनौं ।’
नेता महतोले दलीय सिस्टममा दलहरु आफैं निर्वाचनमा जाने भएकाले आफ्नो पार्टीले गठबन्धन गरेर जाने विषयलाई महत्व नदिएको तर्क गरे । उनले स्थानीय तहमा आवश्यकताको आधारमा अन्य दलसँग चुनावी तालमेल गरेर जाने निर्णय गर्ने अधिकार स्थानीय पार्टीलाई दिइएको पनि उल्लेख गरे ।